theZOMI: [mrsorcerer:38186] မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် မိမိကျရာ အခန်းကဏ္ဍများမှ ပါဝင်ရန် MTP မှဖိတ်ခေါ်ခြင်း...
[mrsorcerer:38186] မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် မိမိကျရာ အခန်းကဏ္ဍများမှ ပါဝင်ရန် MTP မှဖိတ်ခေါ်ခြင်း...
မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် မိမိကျရာ အခန်းကဏ္ဍများမှ ပါဝင်ရန် MTP မှဖိတ်ခေါ်ခြင်း...
Posted by Zaw Aung on May 7, 2013 at 4:30pm
ဆွေးနွေးသူများ၊ ဒေါက်တာတင်လှိုင်၊ ဦးလှမောင်ရွှေ၊ ဦးကိုကိုကြီး နှင့် MTP ဦးကျော်ဇောခိုင်နှင့်အခန်းနားမှုးအမျိုးသမီး၂ဦး
ရေးသူ - အေးငြိမ်း
(၁) အခြားသူများတော့ မပြောတတ်ပါ။ ကျွန်တော့်အနေနှင့်မူ သည်ပွဲ (မြန်မာ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဖြစ်စဉ်နှင့် စင်ကာပူ ရောက် မြန်မာ တတ်/သိပညာရှင်များ၊ ကျွမ်းကျင်သူများ၏ အခန်းကဏ္ဍစကားဝိုင်း - Panel Discussion) ကို အောင်အောင် မြင်မြင် ကျင်းပနိုင်ခဲ့ခြင်းအတွက် အလွန်ဝမ်းသာအားရ ဖြစ်မိပါ၏။ ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့သားအားလုံးလည်း ကျွန်တော်ကဲ့သို့ပင် ၀မ်းမြောက်ခြင်း အရသာကို ခံစားရမည်မှာ သေချာလှပါ၏။ စီစဉ်ပေးသော ကိုဘိုဘိုဝင်း၊ ကိုဝင်းမြင့်၊ မအေးမာမာ တို့ အပါအ၀င် အဖွဲ့သားအားလုံးကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။ (နောက်မှ အမည်စာရင်း သပ်သပ်ထပ်ထည့်ပါမည်။)
ယခု ကျွန်တော်တို့လုပ်သော ပွဲအကြောင်း ဂဃနဏမစုံစမ်း၊ မလေ့လာဘဲလျှက် အတင်းပြော လာသူများကို ကျွန်ုပ်တို့အနေနှင့် ဘာမှ မပြောလိုပါ။ သို့သော်လည်းလေ ဤသို့ပြောသူများမှာ တစ်ယောက်စ၊ နှစ်ယောက်စမျှသာ ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်သည့် ပရိသတ်အများစုကြီးမှာ ထောက်ခံအားပေးကြောင်း ကျွန်တော်တို့ Face Book ပေါ်မှ comment များကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် သိနိုင်ပါ၏။
(၂) အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ၃၅ဆက်မြောက် သမ္မတဖြစ်သော ဂျွန်အက်ဖ် ကနေဒီက ၎င်း၏ သမ္မတအဖြစ် ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲတွင် သမိုင်းတွင်ရစ်သော မိန့်ခွန်းကို ပြောခဲ့၏။
"Ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country" ဟူ၍ ဖြစ်၏။
ခုနင်ကပြောခဲ့သည့် အတင်းဆိုလိုသူများအားလည်း အသင့်တိုင်းပြည်အတွက် သင်တတ်နိုင်သည့်ဘက် မှ လုပ်ပေးဘို့ ဖိတ်ခေါ်ပါသည်ဟု ပြောလိုပါသည်။
ကျွန်တော့်ဖေ့စ်ဘွတ်တွင် စင်ကာပူရောက် တတ်၊ သိ ပညာရှင်များ၏ အခန်းကဏ္ဍ ဟု တင်လိုက်တော့ ညီမငယ် တစ်ဦးက ဟင်၊ ဒီလိုဆို တတ်သိပညာရှင်မဟုတ်တဲ့လူတွေ မပါရတော့ဘူးလား ဟု မေးလာပါ၏။ မအေးအေးမာက ညီမလေးရယ်၊ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူ ဘယ်သူမဆို ပါဝင်ဆင်နွှဲလို့ရပါသကွယ် ဟု အကြောင်းပြန်လိုက်ပါသည်။
ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်သည်မှာ Myanmar Transitional Platform ဟူသည် ဆရာဝန်နှင့်အင်ဂျင်နီယာများချည်း၊ အရာရှိကြီးများအတွက်မျှသာမဟုတ်။ မြန်မာနိုင်ငံကောင်းကျိုး သယ်ပိုးလိုသူ၊ ကိုယ်ကျရာ တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှ ပါဝင်လိုသူအားလုံး ပါဝင်လို့ရပါသည်။ ပလက်ဖောင်းဟူသည် အားလုံးအတွက် မဟုတ်ပါလား။ သည်ကိစ္စမျိုးဆိုတာ တစ်ဦးကောင်း၊ တစ်ယောက်ကောင်းနှင့် လုပ်လို့ရတာမျိုးမဟုတ်။ အားလုံး စိတ်တူကိုယ်တူ၊ တက်ညီလက်ညီလုပ်ကြမှ ခရီးရောက်တာမျိုးဖြစ်၏။
(၃) ယခုပြီးသွားသည့်ပွဲမှာ ပထမဦးဆုံး ခြေလှမ်းမျှသာ ဖြစ်ပါသည်။ နောင် လုပ်စရာ၊ အများအပြားကျန်ပါသေး၏။ ထိုလုပ်ငန်းများအတွက် အသိပညာ၊ အတတ်ပညာအား၊ ကာယအား၊ ဉာဏအား၊ ငွေအား၊ အများအပြား လိုပါသည်။ မိတ်ဆွေတို့ထံမှ အကြံဉာဏ်များ၊ အားပေးမှုများ လိုပါသည်။ Resources (မိမိတို့ လုပ်ကိုင်နေသည့် လုပ်ငန်းအလိုက် လေ့လာသင့်သည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ရည်ညွှန်းစာအုပ်စာတမ်း၊ လက်ကမ်းစာစောင် စသည့် စာအုပ် စာတမ်းများ စသည်) များလည်း လိုပါသည်။
သို့အတွက်လည်း MTP သို့ ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်လိုပါလျှင် အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် email သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်
ဒေါက်တာ သိန်းသန်းဝင်း heinthanwin23@gmail.com
အောက်ဖေါ်ပြပါလင့်ခ်များကို ကလစ်လုပ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ပြုစုသူ - အေးငြိမ်း
အခန်းအနား စတင်ကျင်းပခြင်း Chinese Chamber of Commerce Hall, Singapore (near Peninsula Plaza)
မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးဝါး ကွပ်ကဲထိန်းချုပ်ရေး ဆေးညွှန်းစာမပါပဲရောင်းချခွင့်မရှိသောဆေးဝါးများထိန်းချုပ်ရေး...
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း e-Government ဆိုင်ရာ ဖြစ်ထွန်းမှုများနှင့်မြန်မာနိုင်ငံ...
နိုင်ငံရပ်ခြားရှိ မြန်မာ အိမ်အကူအမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေးကိုအာမခံနိုင်မည့် ဥပဒေများ...
Member of Myanmar Transitional Platform
SETTING UP "EMERGENCY LIFE SAVING SYSTEM" IN MYANMAR ...
Presented by Than Than Sint
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများ နှင့် အခြေခံသတင်းအချက်အလက်များ၏ အခန်းကဏ္ဍ...
မြန်မာဘူမိဗေဒ ပညာရှင်များအသင်း (စင်္ကာပူ) ၏ ဆွေးနွေးတင်ပြချက်...
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အဆောက်အဦများအတွက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်...
Enlarge the Pie: Building Win-Win Negotiation Culture...
B.E Mechanical (RIT Yangon), M.Sc AIT (Bangkok), M.E (NTU, Singapore)
မြန်မာနိုင်ငံ၌ လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး ယဉ်ကျေးမှုတစ်ရပ်ပျိုးထောင်ခြင်း...
အေးငြိမ်း (လေးမျက်နှာ) phonemyatnyein@gmail.com
Safety Officer (Singapore)
B.E (Mechanical), ex-lecture of Agriculture University (Yezin, Myanmar)
အစားအသောက်ကြောင့်ဖြစ်သော ဘေးအန္တရာယ်များမှ ကာကွယ်နိုင်အောင် ထိရောက်သော Food Management System တစ်ခုတည်ထောင်ရေးပေါ်လစီ...
မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ် နှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ...
မြန်မာ့အပြောင်းအလဲနှင့် စင်ကာပူရောက်မြန်မာပညာရှင်များ၏အခန်းကဏ္ဍ (စကားဝိုင်း)...
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မင်း၊ သမ္မတအကြံပေးဦးလှမောင်ရွှေ၊ ပညာရှင်ဒေါက်တာတင်လှိုင်
စင်ကာပူနှင့်နိုင်ငံတကာမှမြန်မာများ တတ်သိပညာဆိုင်ရာ Institution မိမိတို့ဖာသာ တည်ဆောက်ပြီး၊ တိုင်းပြည်အတွက် ပြည်တွင်း-ပြည်ပ တတ်သိပညာရှင်များနှင့် ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော်မှ ဦးဆောင်လုပ်ပေးနိုင်မှုမရှိသေး၊ နောင် ၂၀၁၅ကျမှ မြန်မာပြည်တွင်ပြည်ပပညာရှင်ဈေးကွက်ရှိလာပါမည် ဟု ၀န်ကြီးဦးအောင်မင်းက ပြောဆိုပါသည်။
အထက်ပါလင့်ခ်၊ ဓါတ်ပုံများကို အချိန်၊စေတနာများစွာဖြင့်ဖန်တီးပေးသော ဦးအေးငြိမ်း၊ MPT တက်ရောက်သူများနှင့် MTP အဖွဲ့သားများအားလုံးကိုမေတ္တာဖြင့်ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း။ ... ဇော်အောင်